YEYINTNGE(ကနဒေါ): ရုရှား-ယူကရိန်း ခရိုင်းမီးယားအရေးပြီးတော့ မြန်မာ-တရုတ် ‘၀’ အရေးလား၊
ရုရှား-ယူကရိန်း ခရိုင်းမီးယားအရေးပြီးတော့ မြန်မာ-တရုတ် ‘၀’ အရေးလား၊
ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း အမြန်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း အပါအ၀င် တရုတ်၏ မဟာဗျူဟာ လမ်းကြောင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခါးလယ်ပိုင်းအားဖြတ်၍ သွယ်တန်းထားသော ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း တည်နေရာပြမြေပုံ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခါးလယ်ကို ဖြတ်သန်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့သို့ သွယ်တန်းထားသော ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း၏ အလားအလာမှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ဒေသခံများ ကန့်ကွက်နေသည့် ကြားမှပင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့သည့် ထိုပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခများ၊ မကျေနပ်မှုများမှာ အားကောင်းနေဆဲ . . . . .
ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ပါဝင်သော မဒေးကျွန်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းခွင်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက တွေ့ရစဉ်
တရုတ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေး အခင်းအကျင်းအတွက် မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နျစ်ကပင် ရှာဖွေခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် အခြားဒေသများအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိရန် အပါအ၀င် စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက်မည့် ပုလဲသွယ် မဟာဗျူဟာ (String of Pearl's Strategy) ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။
အနောက်ဘက်တံခါး လုံခြုံရေးလို့ အကြီးအကျယ် ၀ါဒဖြန့်နေတဲ့ အချိန်မှာ အရှေ့ဘက်မှာ တံခါးတောင်မရှိတဲ့ အဖြစ်မျိုး ရောက်သွားမယ့် စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် ၅၀ BOT ကို တရုတ်ငွေနဲ့ဆောက်တဲ့ ဒီစီမံကိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်ပါတယ်။ အသေအချာ လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါ ဒီစီမံကိန်းကို လက်ခံခဲ့သူ၊ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ သူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားမှ . . . . .
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပုလဲသွယ် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ (Source:American Action's Blog)
ရခိုင်ပဋိပက္ခ၊ ပြည်တွင်းမွတ်စလင် အဓိကရုဏ်းတွေကြားထဲမှာ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းပြီးသွားတယ်။ အခု ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွေကြားထဲမှာ ဒီရထားလမ်းကြီး ပြီးသွားလို့ မဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက . . . . .
“လာအိုနိုင်ငံ အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့် အခမ်းအနားတစ်ခု ကျင်းပဖို့ရှိတိုင်း တရုတ်နိုင်ငံဆီက ငွေကြေးနဲ့ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ဖို့ အကူအညီ တောင်းခံလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အရင်ဆုံး အာဆီယံအားကစားပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ အားကစားကွင်းအသစ် တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ နောက်တစ်ခုက ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ASEM ညီလာခံစင်တာနဲ့ ညီလာခံတက်ရောက်သူတွေ နေထိုင်ဖို့ အဆောက်အအုံတွေကို တရုတ်က ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်တန်းတစ်ခုလည်း မြို့တော်ဗီယန်ကျင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်” ဟု အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ သတင်းစာဆရာ Tom Fawthrop ကဆိုသည်။
ထို့ပြင် ကူမင်းနှင့် ဗီယန်ကျင်းကို ဆက်သွယ်မည့် အမြန်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှု စီမံကိန်းကို စတင်လျက်ရှိပြီး ထိုစီမံကိန်း ပြီးစီးပါက တရုတ်နိုင်ငံမှ တရားဝင်နှင့် တရားမ၀င် နည်းလမ်းများဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ လာအိုနိုင်ငံသို့ အများအပြား ရောက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် လာအိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၅၀ အကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်နေသည်ဟု Tom Fawthrop က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ရွှေတြိဂံနယ်မြေ အတွင်းမှာဆိုရင် လာအိုကွန်မြူနစ် အစိုးရကနေ ဟက်တာပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ပမာဏကို တရုတ်ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Chao Wei နဲ့ သူ့ King Romans Group ဆီ လက်လွှဲထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေ ပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာ-တရုတ် ဆက်ဆံရေး သမိုင်းအရ အစိုးရနှစ်ရပ်အကြား အပေးအယူ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း များစွာရှိခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တာဝန်ယူခဲ့သည့် မြန်မာအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တာဝန်ယူခဲ့သည့် အစိုးရများ လက်ထက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုအားထားမှုများ ရှိလာခဲ့ပြီး ချေးငွေရယူခြင်းများ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းများကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န၀တ) အစိုးရလက်ထက်နှင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) အစိုးရလက်ထက်များတွင် တရုတ်ထံမှ အကူအညီရယူမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမှုတို့ ပွင့်လင်းမြင်သာခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များပြမြေပုံ (Source:Myanmar Peace Monitor)
အောက်တိုဘာ ၁ - မော်စီတုံး၏ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ - တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို မြန်မာအသိအမှတ်ပြု။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ် အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုသည့် ဆိုရှယ်လစ်မဟုတ်သော ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့။
ဇန်န၀ါရီမှ မတ် - ယူနန်မှ ကူမင်တန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀၀ ကျော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံ၌ အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု ထူထောင်။
ဇွန် ၈ - တရုတ်နှင့် မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဆင့် သံအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပေကျင်းနှင့် သံအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သော ၁၆ ခုမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာ။
အောက်တိုဘာ ၂၀ - မြန်မာ-တရုတ် မိတ်ဆွေဖြစ်အသင်းကို ရန်ကုန်မြို့၌ ထူထောင်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ် မေ ၁၁ ရက်တွင် ပေကျင်း၌ ထူထောင်ခဲ့။
ဧပြီ ၂၂ - တရုတ်နှင့်မြန်မာ ပထမဆုံး စီးပွားကုန်သွယ်မှုစာချုပ် ချုပ်ဆို။
ဇွန် ၂၈ မှ ၂၉ - တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ချူအင်လိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးလာရောက်။ ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ‘ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူငါးချက်ကို’ ထောက်ခံပြောဆိုပြီး တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအတွက် လမ်းညွှန်အဖြစ် သဘောထား။
ဒီဇင်ဘာ ၁ မှ ၁၆ - မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။ မြန်မာသည် တရုတ်ရန်သူများ၏ နောက်လိုက်မဖြစ်စေရ၊ တရုတ်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ရန် စစ်စခန်းအဖြစ် အသုံးချ မခံစေရဟု ဦးနုကတိပေး။ မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မည် မဟုတ်ဟု မော်စီတုံးပြောကြား။
ဧပြီ ၁၄ မှ ၁၆ - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘန်ဒေါင်းတွင်ပြုလုပ်သည့် အာရှ-အာဖရိက ညီလာခံသို့ မတက်ရောက်မီ ဦးနု၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ချူအင်လိုင်းရောက်လာ။
သြဂုတ် ၂၆ - ကူမင်း၌ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးဖွင့်။
အောက်တိုဘာ ၂၂ မှ နိုဝင်ဘာ ၈ - ဖဆပလဥက္ကဋ္ဌ ဦးနုအား နယ်စပ်ကိစ္စဆွေးနွေးရန် ပေကျင်းသို့ဖိတ်ခေါ်။ တရုတ်က နယ်စပ်ကိစ္စကို ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအတိုင်း လက်ခံပြီး အစောပိုင်းတောင်းဆိုမှု အများစုကို စွန့်လွှတ်။ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) ကို ‘၁၉၄၁ မျဉ်းကြောင်း’ အရှေ့ဘက်သို့ ဆုတ်ခွာပေးရန် တရုတ်သဘောတူ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ မှ ၂၀ - ၀န်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်းနှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်။ နယ်စပ်ပြဿများ ဆွေးနွေး။ တရုတ်အစိုးရ၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား တရုတ်လူမျိုးများ မူဝါဒကို ရှင်းပြ။
မတ် ၂၂ မှ ဧပြီ ၂ - မကျူးကျော်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ဦးနုအဆိုပြု။ ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင်ပြုလုပ်သော တရုတ်အမျိုးသားကွန်ဂရက် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ချူအင်လိုင်းက မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ပြဿနာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ - မဟာခုန်ပျံကျော်လွှား အစီအစဉ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ယူနန်ပြည်နယ်ဒေသခံ တစ်သိန်းကျော် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေး။ ၎င်းတို့အနက် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်။
မတ် - ကူမင်တန်တပ်များကို တိုက်ခိုက်ရန် မြန်မာစစ်တပ်၏ နွေဦးစစ်ဆင်ရေးစတင်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၄ မှ ၂၉ - ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်။ နှစ်နိုင်ငံ မိတ်ဆွေဖြစ်ရေးနှင့် မကျူးကျော်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး နယ်စပ်ပြဿနာအပေါ် သဘောတူညီမှုရ။
စက်တင်ဘာ ၈ မှ အောက်တိုဘာ ၄ - ဦးနုခေါင်းဆောင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၃၅၀ ပါဝင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ - မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နှစ်ကြိမ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီး ကူမင်တန်များကို တိုက်ခိုက်။
ဇန်န၀ါရီ ၂ မှ ၉ - ချူအင်လိုင်းဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ ကျော်ပါသော တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အုပ်စုကိုးစုခွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်ရန်နှင့် နယ်စပ်စာချုပ် လဲလှယ်ရန်ဖြစ်။ ခရီးစဉ်တွင်း တရုတ်က မြန်မာသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ချေးမည့် စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းမှုစာတမ်း လက်မှတ်ထိုး။
မတ် ၂ - ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်း
မတ် ၇ - တရုတ်သံအမတ်ကြီး လီယီမန်းက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံ အသိအမှတ်ပြုလွှာပေးပို့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းထံ ၀မ်းမြောက်ကြောင်း ကြေးနန်းပေးပို့။ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုသည့် စတုထ္ထမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာ။
မတ် ၁၂ - မြန်မာ့နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒနှင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို တိုက်ရိုက်ဝေဖန်ခြင်း မပြုရန် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရန်ကုန်ရှိ တရုတ်သံရုံးသို့ ညွှန်ကြား။
ဧပြီ ၂၀ မှ ၂၆ - ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် မြန်မာအစိုးရကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် ဆက်သွယ်ပေးရန် တရုတ်သမ္မတ လျူလျောက်ချီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်။
ဇွန် ၂၈ - ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သခင်ဗသိန်းတင်နှင့် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမောင်မောင်ကျော်ဝင်းတို့ ပေကျင်း၌ ဆွေးနွေး။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ - ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပျက်ကြောင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီ ကြေညာ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ မှ ၁၈ - ချူအင်လိုင်းနှင့် ချင်ယီတို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ပြည်တွင်းရေး၌ မစွက်ဖက်ရေးမူကို ထပ်မံအတည်ပြု။
မတ် ၁၉ - တရုတ်လူမျိုးပိုင် စတိုးဆိုင် ၆၇၀၀ အပါအ၀င် စတိုးဆိုင် ၁၀၀၀၀ ကျော်ကို ပြည်သူပိုင်သိမ်း။
ဇူလိုင် ၁၀ မှ ၁၁ - ရန်ကုန်သို့ ချူအင်လိုင်း လျှို့ဝှက်လာရောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် သုံးကြိမ်ဆွေးနွေး။
ဧပြီ ၁ - တရုတ်စာသင်ကျောင်း ၁၆ ကျောင်း အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အလယ်တန်းကျောင်း ၁၂၉ ကျောင်းကို ပြည်သူပိုင်သိမ်း။
ဧပြီ ၃ မှ ၄ - ရန်ကုန်သို့ ချူအင်လိုင်း ရောက်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် ဆွေးနွေး။
ဇူလိုင် ၁၄ မှ သြဂုတ် ၁ - တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း သွားရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူငါးချက်ကို ထပ်မံအတည်ပြုသည့် ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်။
ဇန်န၀ါရီမှ ဇွန် - မော်စီတုံးအတွေးအခေါ်၊ ဆိုဗီယက်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်စီတုံးအား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာတွင် အဆက်မပြတ်ဖော်ပြ။
ဇွန် ၂၆ မှ ၂၈ - ရန်ကုန်တွင် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွား။ တရုတ်တန်း၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် တရုတ်သံရုံးတို့ တိုက်ခိုက်ခံရ။
ဇွန် ၂၉ - မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်မလွှတ်ရန် တရုတ်အစိုးရ ဆုံးဖြတ်၊ နှစ်လအကြာတွင် တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို မြန်မာအစိုးရ ပြန်ခေါ်၊ ပေကျင်းရှိ မြန်မာသံရုံး အပြင်ဘက်တွင် လူနှစ်သိန်းခန့် ဆန္ဒပြ။
ဇွန် ၃၀ မှ ဇူလိုင် ၃ - ပေကျင်းရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် လူတစ်သန်းကျော် ဆန္ဒပြ၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် သံရုံးထဲသို့ ဆန္ဒပြသူများ အဓမ္မ၀င်ရောက်ပြီး မြန်မာအလံနှင့် နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ကို ဖျက်ဆီး။
ဇူလိုင် ၇ - တရုတ်စီးပွားရေး အကူအညီကို မြန်မာရပ်စဲ။ တရုတ်လူမျိုး ကျွမ်းကျင်သူအားလုံး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် အကြောင်းကြား။ တရုတ်ကျွမ်းကျင်သူ ၄၁၂ ဦး တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်။
ဇန်န၀ါရီ ၁ - တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာနယ်စပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လမ်းကြောင်းသုံးကြောင်းဖြင့် ၀င်ရောက်လာ။ လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းစီတွင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းမှ လူမျိုးစုစစ်သားများ တာဝန်ယူသည့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တပ်ခွဲတစ်ခွဲစီ ပါဝင်။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပုန်ကန်မှုအတွက် တရုတ်၏ အကူအညီ စတင်။
ဇန်န၀ါရီ - ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်စတင်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို တရုတ်အရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေး။
နိုဝင်ဘာ ၆ - မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ပါတီ၏ လေးကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် တရုတ်နှင့် ပြန်လည်စတင်လိုကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းပြော။
ဇန်န၀ါရီ ၃ - တရုတ် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပေကျင်းရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်။
မေ ၁ - တိအန်မင်ရင်ပြင် မေဒေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် မော်စီတုံးက မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံအား နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအား သတိရကြောင်းပြောရန် မှာကြား။
နိုဝင်ဘာ ၂၂ - ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး မြန်မာထောက်ခံမဲပေး။
သြဂုတ် ၆ မှ ၁၂ - ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ။ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပင်လယ်ရပ်ခြား တရုတ်လူမျိုးများ အရေးကို ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် ချူအင်လိုင်းတို့ ငါးကြိမ်ဆွေးနွေး။
အောက်တိုဘာ ၉ - ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကို နှင်းအပ်ရန် မြန်မာနှင့် အခြားနိုင်ငံ ၂၀ က ကုလသမဂ္ဂတွင် အဆိုပြု။
နိုဝင်ဘာ ၁၁ မှ ၁၅ - တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း သွားရောက်လည်ပတ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသော မော်စီတုံးက လက်ခံတွေ့ဆုံ။ မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ စစ်စခန်းဆောက်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ဟု ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ကတိပေး။
ဧပြီ ၂၇ - တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းသွားရောက်ပြီး ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြဿနာကို ဆွေးနွေး။
စက်တင်ဘာ ၁၈ - ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ကိုရီးယားသို့အသွား ပေကျင်း၌ ခေတ္တရပ်နားပြီး ဟွာကိုဖုန်း၊ တိန့်ရှောင်ဖိန်တို့နှင့် တွေ့ဆုံ။
ဇန်န၀ါရီ ၂၆ မှ ၃၁ - တရုတ်ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် တိန့်ရှောင်ဖိန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ။
ဇူလိုင် ၉ မှ ၁၃ - မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ပေကျင်းသို့ရောက်ရှိပြီး စီးပွားရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး။ မြန်မာသို့ အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယွမ်ငွေတစ်ဘီလျံကို ခုနစ်နှစ်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် သဘောတူ။
အောက်တိုဘာ ၂၀ မှ ၂၃ - တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၁၁ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း သွားရောက်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၆ - ၃၀ - တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ကျောက်ကျိယန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ - မြန်မာသမ္မတ ဦးစန်းယု တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
မတ် ၄ မှ ၈ - တရုတ်သမ္မတလီရှန့်နင် ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိပြီး ချူအင်လိုင်းလက်ထက်က ချမှတ်ခဲ့သည် ပင်လယ်ရပ်ခြား တရုတ်လူမျိုးများမူကို ထပ်မံအတည်ပြုပြောဆို။
မေ ၄ မှ ၉ - တိန့်ရှောင်ဖိန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဧပြီ ၁၀ မှ ၁၈ - မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်ခ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
နိုဝင်ဘာ ၁၆ - တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာချုပ်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ ချုပ်ဆို။ ရန်ကုန်-သန်လျင် တံတားအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ရန်ပုံငွေအဖြစ် အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယွမ်သန်း ၈၀ ကို တရုတ်ကချေးရန် ကတိပြု။
စက်တင်ဘာ ၂၂ - တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ပြောခွင့်ရသူ ကျင်ကွေ့ဟွာက တရုတ်သည် မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို ၀င်မစွက်ဖက်ကြောင်း၊ သို့သော် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆို။
မေ ၂၅ - အသစ်ခန့်အပ်လိုက်သည့် မြန်မာသံအမတ်ကြီးအား တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် လီပင်းက တရုတ်၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ထပ်မံအတည်ပြုပြောဆို။
ဇွန် ၁၃ - နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န၀တ) အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က တရုတ်သံအမတ်ကြီး ချင်ရွေ့စဲင်အား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ တိန်အန်မင်ရင်ပြင် ဆန္ဒပြပွဲတွင် တရုတ်အစိုးရက အင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့မှုကို စာနာနားလည်ကြောင်း ပြောကြား။
အောက်တိုဘာ ၁၈ မှ ၂၉ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေခေါင်းဆောင်သည့် ၂၄ ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၇ - စီးပွားရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး၊ တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငါးနှစ်အတိုးမဲ့ ချေးငွေပေးရန် သဘောတူ။
ဇန်န၀ါရီ ၂၈ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ - တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး န၀တဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်နှင့်တွေ့ဆုံ။ တရုတ်အကူအညီဖြင့် ဆောက်လုပ်သည့် အမျိုးသားဇာတ်ရုံကို မြန်မာအစိုးရသို့ လွှဲပြောင်း။
သြဂုတ် ၂၀ မှ ၂၅ - ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ - ပုသိမ်တွင် တရုတ်ရေတပ်စခန်းတစ်ခု အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်သည်ဆိုခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ငြင်းဆို။
ဇူလိုင် ၃၀ - တရုတ်က မြန်မာကို အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယွမ်သန်း ၅၀ ပေးအပ်။
ဇူလိုင် ၃၁ - တရုတ်ချေးငွေယွမ် ၀ ဒသမ ၁ ဘီလျံဖြင့် ဆောက်လုပ်သော သန်လျင်တံတားပြီးစီး။
သြဂုတ် ၁၀ မှ ၁၅ - တရုတ်အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်။
သြဂုတ် ၂၂ - မန္တလေးမြို့တွင် တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးဖွင့်။
စက်တင်ဘာ ၇ မှ ၁၄ - န၀တ အတွင်းရေးမှူး-၁ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ မှ ၂၈ - တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီပင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး န၀တဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံ။ အဓိက ပရောဂျက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် PRC ကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမည်ဟု လီပင်းပြောကြား။ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တည်ငြိမ်မှု၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူငါးချက်၊ ပင်လယ်ရပ်ခြား တရုတ်လူမျိုးများ အရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး တရုတ်၏ ကြောင့်ကြမှုများကို လီပင်းက ထပ်မံပြောဆို။
ဇန်န၀ါရီ ၇ မှ ၁၃ - န၀တဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။ ချေးငွေသဘောတူညီမှု မူကြမ်းတစ်စောင်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး။
ဧပြီ ၂၈ မှ မေ ၃ - တရုတ်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက မြန်မာ၏ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူဝါဒနှင့် မူငါးချက်ကို လိုက်နာကြောင်း ထပ်မံပြောကြား။
အောက်တိုဘာ ၂၂ မှ ၂၉ - န၀တဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
မတ် ၂၄ မှ ၂၇ - တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးချုပ် လူဝေါ်ကန်းဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ။ နယ်စပ်ဒေသ အုပ်ချုပ်မှု သဘောတူညီချက်နှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်းမှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုး။ လယ်ယာကဏ္ဍအတွက် စက်ကိရိယာနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် ယွမ်ငွေငါးသန်း ချေးယူခွင့်ပြု။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ - မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ၌ပြုလုပ်သော တရားဝင်မဟုတ်သည့် တရုတ်-အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၌ သမ္မတ ကျန်ဇီမင်းက န၀တဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား တွေ့ဆုံပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာသည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြား။
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ - တရုတ်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ထန်းကျားရွှမ် ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိ။ သံတမန်၊ အစိုးရအမှုထမ်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး။
ဇွန် ၇ မှ ၁၁ - န၀တ အတွင်းရေးမှူး-၁ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဇွန် ၅ မှ ၁၂ - န၀တဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဇူလိုင် ၁၆ မှ ၁၈ - တရုတ်ဒုတိယသမ္မတ ဟူကျင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ။
စက်တင်ဘာ ၁၈ - ပေါင်းလောင်းရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ စီမံကိန်းအတွက် တရုတ်ပို့ကုန်-သွင်းကုန်ဘဏ်မှ ယွမ်ငွေတစ်ဘီလျံ ထုတ်ယူ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ မှ ၁၅ - တရုတ်သမ္မတ ကျန်ဇီမင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၃၅ ဦး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ။ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း စာချုပ်များချုပ်ဆို။
ဇန်န၀ါရီ ၆ မှ ၁၁ - န၀တဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ကျန်းမာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အပါအ၀င် အခြားစာချုပ်များ ချုပ်ဆို။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အတိုးနှုန်းလျှော့ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀ ဒသမ ၂ သန်းချေးမည်ဟု ကျန်ဇီမင်းကတိပြု။
ဇူလိုင် ၃ မှ ၅ - နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းအောင်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ အထူးသံတမန်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
သြဂုတ် ၂၂ - တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးအားတွေ့ဆုံ။
အောက်တိုဘာ ၆ - တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်နှင့် မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီ၌တွေ့ဆုံ။
ဇူလိုင် ၁၁ မှ ၁၇ - ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး စာချုပ်နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ၁၂ ခု လက်မှတ်ရေးထိုး။
ဇူလိုင် ၂၁ မှ ၂၈ - နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
နိုဝင်ဘာ ၂ မှ ၆ - ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း၏ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဧပြီ ၂၃ - သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာ၌ ပြုလုပ်သည့် အာရှ-အာဖရိက ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် တွေ့ဆုံ။
ဇူလိုင် ၄ - တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတို့ ကူမင်းတွင်ပြုလုပ်သော ဂျီအမ်အက်စ် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၌ တွေ့ဆုံပြီး စာချုပ်တစ်ခု လက်မှတ်ရေးထိုး။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ - ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတို့ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ တွေ့ဆုံ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ မှ ၁၈ - ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနှင့် သမ္မတဟူကျင်းတောင်တို့ တရုတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံပြီး စာချုပ်နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာရှစ်ခု လက်မှတ်ရေးထိုး။
အောက်တိုဘာ ၂၂ - နအဖဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံ။
အောက်တိုဘာ ၃၁ - ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတို့ တရုတ်- အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် တွေ့ဆုံ။
ဇန်န၀ါရီ ၃၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်နှင့် တွေ့ဆုံ။
ဧပြီ ၃ - ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဇွန် ၅ မှ ၁၀ - နအဖ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်။
ဇူလိုင် ၁၂ - မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူဝါဒကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့သို့ ၀င်ရောက်ရန် ထိုင်ဝမ်၏ကြိုးပမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်။
စက်တင်ဘာ ၁၃ - ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ အထူးသံတမန်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
စက်တင်ဘာ ၁၃ - မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် အစိုးရ၏ အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ထုတ်ဖော်ပြောကြား။
အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ ၂၅ - တရုတ်လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး အီဘရာဟင်ဂမ်ဘာရီတို့ ပေကျင်း၌ဆွေးနွေး။
နိုဝင်ဘာ ၁၄ မှ ၁၆ - တရုတ်ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံ။
နိုဝင်ဘာ ၁၉ - ၀န်ကြီးချုပ်ဝမ်ကျားပေါင်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်တို့ စင်ကာပူ၌ တွေ့ဆုံ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ မှ ၁၉ - ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး အီဘရာဟင်ဂမ်ဘာရီ ပေကျင်းသို့ရောက်ရှိ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံ။
မတ် ၁၈ - မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာက သတင်းကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ပြီး ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး ထိုင်ဝမ်၏ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းဖော်ပြ။
မေ ၂၅ - တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံ။
သြဂုတ် ၂၁ - ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး တရုတ်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ။
နိုဝင်ဘာ ၂၉ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဒီဇင်ဘာ ၄ မှ ၅ - တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံ။
မတ် ၁၈ - မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသော CCP ဗဟိုကော်မတီ ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် လီချန်းချွန်နှင့် နအဖအတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးတို့ ဆွေးနွေး။
အောက်တိုဘာ ၂၄ - မြန်မာသည် ပြဿနာများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး နယ်စပ်တည်ငြိမ်မှုရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်ပြောကြား။
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ မှ ၂၀ - တရုတ်ဒုတိယသမ္မတ ရှီကျင်းပင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးနှင့်ဆွေးနွေး။
ဇွန် ၂ မှ ၃ - ၀န်ကြီးချုပ်ဝန်ကျားပေါင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် အခြားကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စာချုပ်စာတမ်း ၁၅ ခု လက်မှတ်ရေးထိုး။
ဇူလိုင် ၃ မှ ၁၂ - နအဖ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။ စွမ်းအင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် အရှိန်မြှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု တရုတ်ဒုတိယ၀န်ကြီး ကတိပေး။
စက်တင်ဘာ ၁၆ မှ ၂၀ - ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလျံ ချေးငွေရယူ။
နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် - မြန်မာရွေးကောက်ပွဲကို တရုတ်အစိုးရ ကြိုဆို။
ဧပြီ ၂ မှ ၅ - CPPCC အမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းတို့နှင့် ဆွေးနွေး။ ခရီးစဉ်အတွင်း စာချုပ်ငါးစောင်ချုပ်ဆို။
မေ ၁၂ မှ ၁၅ - တရုတ် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နှင့် တွေ့ဆုံ။
မေ ၂၆ မှ ၂၈ - သမ္မတဦးသိန်းစိန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆၅ သန်းချေးငွေ အပါအ၀င် စာချုပ်ကိုးစောင်ချုပ်ဆို။
စက်တင်ဘာ ၃၀ - မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကို မိမိအစိုးရသက်တမ်းတွင် ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကြေညာ။ တရုတ်အစိုးရက ထိုအမိန့်ကို စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်။
အောက်တိုဘာ ၁ - တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ပြောခွင့်ရသူက မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းသည် နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးတွင် သိပ္ပံနည်းကျ စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြား။
အောက်တိုဘာ ၇ - တရုတ်သံအမတ်ကြီး လီကျွင်းဟွာ မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် မြန်မာဝမ်ပေါင်က ဆောင်ရွက်နေသည့် မုံရွာကြေးနီတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်။
အောက်တိုဘာ ၁၀ - နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က သမ္မတ၏ အထူးသံတမန်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
အောက်တိုဘာ ၂၀ မှ ၂၇ - ဒုတိယသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
နိုဝင်ဘာ ၂၇ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ - မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ဖော်ပြောဆို။
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ မှ ၂၀ - တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သော ဂျီအမ်အက်စ် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးတို့နှင့် တွေ့ဆုံပြီး တရုတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုနှင့် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်က ပြောကြား။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ - နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဋ္ဌေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ - ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ။
ဧပြီ ၄ - ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်များက နိုင်ငံရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်လ်ိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့် မြန်မာအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ အပြီးတိုင်ရုပ်သိမ်းပေးရန် တရုတ်အစိုးရ တောင်းဆို။
မေ ၂၁ မှ ၂၆ - ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်သန်းထွဋ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
နိုဝင်ဘာ ၁၂ - ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ - ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ။
ဇူလိုင် ၂၃ - သမ္မတဦးသိန်းစိန် တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့။
အောက်တိုဘာ ၁၂ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ - ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ - တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံ။
ကိုးကား - Modern China-Myanmar Relations by David I.Steinberg and Hongwei Fan၊ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ။
BY YeYint Nge ... 3/17/2014
ဖိုးသောကြာ နဲ့သူ့ချစ်သူ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင် လက်မှတ်ေ...
ဖြိုး‌ငွေစိုး‌ လက်ထပ်မယ့် မော်ဒယ် ဇင်ဇင်
ဗိုလ် မှူး ကို ကို နိုင် ၏ကား၁၀တန်း ဖြေမည့်ကျောင်း...
စက်တင်ဘာလမှာ မဲဆန္ဒနယ် ၂၀ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရှိန...
ဦးအောင်သောင်း၏သား ဦးနေအောင် ဘဏ်ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း...
အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို တရားဥပဒေစိုးမိုးစွာနဲ့ စောင့်...
ဝန်ကြီးဌာနစားပွဲပေါ်မှာ ၃သိန်းအောက် လက်ဆောင်တွေ တရာ...
တယောက်ယောက်က လေယာဉ်ကို တမင်သက်သက် လမ်းကြောင်း လွှဲခ...